ISuperSport United yenqabe imali yeDowns ngomgadli | isiZulu
ISuperSport United yenqabe imali yeDowns ngomgadli
Johannesburg - Kubikwa ukuthi iSuperSport United inqabe imali ebekwe etafuleni yiMamelodi Sundowns efuna umgadli uJeremy Brockie.
ISundowns isiqalile ukuthenga abadlali ngenhloso yokuqinisa isikwati sayo ngaphambi kokuqala kwesizini njengoba isithenge no-Oupa Manyisa kwi-Orlando Pirates futhi nezingxoxo zokuthola uGeorge Lebese weKaizer Chiefs ziyaqhubeka, kubika iKikcOff.com.
Isikhulu esiphezulu seSuperSport uStan Matthews sikuqinisekisile ukuthi bachithe okusha nokugcono okubekwe etafuleni ngoBrockie.
“UJeremy usalelwe yiminyaka emithathu kwinkontileka yakhe neSuperSport futhi asizimisele ngokumdayisa,” kusho uMatthews.
OLUNYE UDABA: IStas ingase isayinise ababedlalela iChiefs
“Empeleni ungithumelele i-email namhlanje efuna inkontileka yesivumelwano eside neqembu, ngakho ngasohlangothini lwethu asinankinga noJeremy. Siyamthanda, ungumgadli wokuqala ukushaya amagoli angu-20 ngesizini amasizini amabili elandelana emlandweni weSuperSport.”
“ISundowns ikhombisa ukuthi imdinga kakhulu. Babeke etafuleni ‘imali enhle’ impela kodwa kithina imali ayiyona yonke into futhi sifuna ukusiza umqeqeshi [u-Eric Tinkler] simnikeze ithuba lokusebenza ngeqembu eliwinayo. Ngakho uJeremy akadayisi.”